Kolombia: Vondrom-Piarahamonina Indizena Miaro Ny Fahavitan-tena Ara-Tsakafony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2011 3:59 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Ελληνικά, Español, Italiano, Français, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, македонски, Aymara, Português, English
Vokatra novokarin'ny vondrom-piarahamonina indizena
Ity lahatsary voalohany (Esp) ity dia mampiseho ny fifamorian'ireo mpiaramonina tao amin'ny toerana natokana ho an-dry zareo indizena tao Huellas Caloto, izay nanasàna ireo avy amin'ny tanàna hafa hitondra sakafo natao tamin'ny vokatra avy eo amin'ny tany novolen-dry zareo ihany. Ranomboankazo, porridge, mofomamy sy vokatra hafa nampiasaina ho ohatra mampirara-kivy amin'ny hoe tsy voatery hiankina amin'izay vokatra nafàrana na novidiana akory ny fikarakaran-dry zareo ny sakafony, fa ny fangaro avy eo an-toerana sy ny nentin-drazana.
Ao anatin'ireto lahatsary roa manaraka ireto (amin'ny teny Espaniola koa) no azontsika hijerena ireo vondrom-piarahamonina indizena Misak ankoatry ny maro hafa mizotra ho any Bogota renivohitra mba hanao fanoherana ny lalàna iray vaovao mandràra ny fivarotana ronono manta. Ao anatin'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo, izay ifampivarotan'ny mpifanolo-bodirindrina ny ronono sy mameno izay sakafony isanandro aminà vokatra avy eo an-toerana ihany, ny fametrahana lalàna iray mamepetra ny fivarotana ronono manta dia midika fa tsy maintsy mividy ronono efa voakarakara amin'ny vidiny lafo ry zareo, izay hisy fiantraikany na ho an'ny mpanjifa ronono na ho an'ny mpivarotra. Nomena ny lohateny hoe “Tsy mahafaty ny Ronono am-bifotsy, Mahafaty kosa ny hanoanana”.
Olana goavana koa ny fahadiovan'ny rano: ao anatin'ity lahatsary manaraka ity, ny Sekoly Ambony Fianarana Momba ny Fifandraisana avy any Avaratr'i Cauca dia mampiseho antsika tranga roa samihafa mifamatotra amin'ny olan'ny rano ary ny fomba hamahàna azy ireny. Amin'ny tranga voalohany, vehivavy iray manasa lamba eny an-drenirano, ary mpifanolo-bodirindrina aminy no tonga miteny azy am-pahatsorana fa hoe ranon-tsavony no azon'izy ireo ery ambany ery noho izy manasa lamba eo. Miala tsiny izy ary miaiky fa tsy noheveriny hahatafintohina ny hafa ny fihetsiny ka hangataka ny ao an-tranony hanangana toerana fanasàna lamba ho azy izy mba tsy handoto intsony ny renirano. Setrin'izany, namaly azy ilay mpifanolo-bodirindrina aminy fa am-pifaliana tokoa no hanampiany azy ireo amin'ny fitadiavana vahaolana sy hanangana izany. Ny sary faharoa dia mampiseho mpizahatany eo akaikin'ny moron-drano, toerana nanaovan'izy ireo fitsangatsanganana saingy navelan-dry zareo teo ny fakony. Tonga avy any ny mpikambana iray avy ao amin'ilay vondrom-piarahamonina ary nitaraina noho ny loto tavela, no sady nandraoka ny fako.
Izany sy ireo asa hafa ataon'ireo vondrom-piarahamonina indizena ao Kolombia dia azonao arahana ao amin'ny tranonkalan-dry zareo (amin'ny teny Espaniola).